List of Outstanding Students from St. Peter’s No.9SHS BEHS | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« For my wife Sarah Hashim Daw Thida Than
Myanmar government needs to give protection to Historical Muslim Cemeteries of Royal Poet, Royal Palace Officers and the Masjids »
List of Outstanding Students from (former St. Peter’s) No.9SHS BEHS
Source: Prof Than Win
State High School no9Mandalay luyechuns 1966 – 1988
Luyechun (actually not at the time of St. Peter’s) pics and facts taken from Dr. Myo Kyi Tha’s comments in the Luyechun FB Group postings.
Dr Than Win and I were the first ever Outstanding Students from St. Peter’s High School (later nationalized and changed name to No.9SHS and now BEHS) in 1966 from standard7and 8 respectively.
I got the last few Outstanding Students from No. BEHS ( formerly known as St. Peter’s High School before nationalized and changed name to No.9SHS)
Dr. Khin Khin Kyawt asked, “What about the dates, years from when to when?
Dr. Myo Kyi Tha ‎answered, “1964 – 1988 ပါ။ ငွေရတုမှာ ဂိတ်ဆုံးပါတယ်။ စခန်းပိတ်ပွဲက ဒိုးပတ်ဝိုင်းနဲ့ပါ။ အဲဒီညတုန်းကတော့ နောက်မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိခဲ့ကြပါဘူး။
Myo Kyi Tha ဆရာ Ko Ko Gyi …….. ကျော်ဆန်းလွင်က လူရည်ချွန်စခန်းမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးသူငယ်ချင်းပါ။ အခုထက်ထိလဲ ပေါင်းနေတဲ့ ၂၅ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း။ Nay Min Tun … ကလဲ ၁၉၈၈ ကနေ အခုထက်ထိ ပေါင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်း … ကိုအောင်မျိုးမင်းနဲ့က ဘွဲ့ရပြီးတော့မှ သိပ်မပေါင်းဖြစ်တော့တာ။ ဆေး ၁ နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းကော်မီတီမှာ သူက အတွင်းရေးမှူး၊ ကျွန်တော်က တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး။ ကျွန်တော်လဲ စိန်ပီတာ တစ်ပိုင်းပါပဲ။ ဆရာ Zay Soe (Resp. Physician, ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းက အခု အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) … စိန်ပီတာသားတွေပေါ့။”
Ko Ko Gyi said: “Dear Dr. Myo Kyi Tha, no wonder, you were friends with ကျော်ဆန်းလွင် (မန္တလေး အထက ၉) ကိုအောင်မျိုးမင်း (မန္တလေး အထက ၉၊ ဆေး ၂)၊… you know about the joke -‘Diamond in the Meter box.’
အထက ၉ ကျာင်းကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေပုံ
Daw Aye Aye Nyunt
တို့ရဲ့အစ်ကိုတွေမောင်တွေပညာရည်နို့သောက်စို့ခဲ့တဲ့မန်းလေးရဲ့အထင်ကရ အထက ၉ ကိုရောက်ခဲ့တယ် ကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေပုံခန်းမထဲမှာချိတ်ထားတာတွေ့တော့လေးစားဂုဏ်ပြုရင်းဓာတ်ပုံတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Tags: Asia, Burma, Education, Myanmar, Nationalization, Religion and Spirituality
This entry was posted on May 25, 2011 at 10:28 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.